Waa maxay Ballaarinta Medicaid? Fahmitaanka Daloolka Caymiska | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Ballaarinta Medicaid waxay ahayd qayb ka mid ah Xeerka Daryeelka La awoodi karo (ACA). Hadafka ACA wuxuu ahaa in laga caawiyo ka dhigida caymiska caafimaadka mid ay awoodi karaan dadka dakhligooda hooseeyo. Madaxweyne Obama ayaa uu saxiixay ACA inuu yahay sharci 2010.
Waa tee cida lagu daboolayo ballaarinta Medicaid?
Ballaarinta Medicaid waxay siisay gobolada fursad ay ku siiyaan caymiska Medicaid dadka kasbada ilaa 138% ee ka mid ka ah heerka saboolnimada federaalka (FPL). FPL waa cabirka dakhliga. Waa jaritaanka si loogu qalmo Medicaid iyo dheefaha kale ee dawladda. Xiriiriyaha macnaha guud Dawladda federaalka waxay cusboonaysiisaa FPL sannad kasta. Ku aadan 2022, FPL waa $13,590 oo loogu talagalay shakhsiyaadka iyo $27,750 oo loogu talagalay qoyska ka kooban 4.
Ballaarinta Medicaid waxay u furtay helitaanka ku aadan Medicaid inta badan 2 kooxahan dakhligooda hooseeyo:
Dadka waaweyn ee aan lahayn wax carruur ah
Dadka kuwaas oo, waagii hore, kasbaday lacag badan si ay ugu qalmaan Medicaid-ka gobolka
Sidee ayaa loo maalgeliyaa ballaarinta Medicaid?
Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Badelka raacitaanka sharciyadaan, dawladda federaalka waxay sidoo kale siineysa gobolada ugu yaraan kala bar maalgelinta loo baahan yahay si loo socodsiiyo barnaamijka Medicaid.
Ka warran kharashyada sida gaarka ah ula xiriira ballaarinta Medicaid? Dhowrkii sano ee ugu horeysay, dowladda federaalka waxay bixisay 100%, ama qaddarka buuxa ee kharashka. Tan iyo intii sanadkii, saamigaas si tartiib ah ayaa loo yareeyay. Laga bilaabo 2020 — iyo sannad kasta oo naga horeeya oo loo socdo — dawladda federaalka aya hadda bixin doonta 90%. Taas waxay la macno tahay dollar kasta oo dheeraad ah oo uu gobolku ku qarashgareeyo ballaarinta Medicaid, dawladda federaalku waxay dabooli 90 doontaa sentiyada kharashka.
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxay siiyaan caawimaad dheeraad ah dadka u baahan.
Waa maxay sababta dhammaan gobolada aysan u heleynin ballaarinta Medicaid? Xiriiriyaha macnaha guud
Gudaha 2012, Maxkamadda Sare ee Maraykanka waxay xukuntay in dawladda federaalka aysan ku qasbi karin gobolada inay ballaariyaan Medicaid sida ku cad ACA. Taasi waa sababta keentay in lacag ugu fadhido gobolada si ay u daboolaan dad badan oo hoos yimaada Medicaid. Natiijada darteeda, gobol kasta waxaa uu dooran karaa in uu ballaariyo ama uusan ballaarin barnaamijkooda Medicaid. Laga bilaabo Diseembar 2021, 38 gobolada lagu daray Washington, D.C. waxay qaateen ballaarinta Medicaid 12 iyo goboladaana ma qaadan.1
Miyaad maqashay farqiga caymiska Medicaid? Waa xaalad saameynaysa koox gaar ah oo dad ah oo ku nool gobolada doortay inaysan ballaarin Medicaid. Dadkani waxay kasbadaan lacag aad u badan si ay ugu qalmaan Medicaid-ka ka jirka gobolkooda. Laakiin wali ma awoodaan inay iska bixiyaan kharashka lagu helo caymiska caafimaadka shakhsiyeed ama qorshaha suuqa qoyska (ACA). Ku dhawaad 2.2 milyan qof ayaa ku dhacay daloolkan caymiska Medicaid.2
Maxay ahayd saamaynta ballaarinta Medicaid?
Kooxda Menges waa shirkad la-talin heer qaran ah oo diiradda saarta sidii ay u heli lahayd qaabab si wanaagsan loogu adeego dadyowga khatarta sare leh. Kooxda Menges waxay sameeyeen daraasad ay isku barbar dhigayaan gobolada qaatay Ballaarinta Medicaid iyo gobolada aan qaadanin. Natiijooyinka muhiimka ah ee ka soo baxay daraasadda Kooxda Menges,3 ee la daabacay Agoosto 2021, waxaa ka mid ah:
In ka badan 9 milyan qof oo caymis la'aan ahaan lahaa ayaa caymis ka helay Ballaarinta Medicaid.
Laga bilaabo 2013–2019, saamiga kharashyada Medicaid ee ay gobolada bixiyaan ayaa wax yar ku kordhay gobolada balaariyay Medicaid marka la barbardhigo kuwa aan ballarin (19.5% ka soo horjeedo 26.4%).
Ballaarinta Medicaid waxay caawisay hoos u dhigida heerka u dhimashada COVID-19 ee dadka da'da ah 18–64.
Dakhliga isbitaalka wuxuu u muuqdaa mid si aad ah u kordhay marka la eego gobollada leh ballaarinta Medicaid.
Sidee ayay ballaarinta Medicaid faa'iido ugu leedahay kuwa baahiyaha gaarka ah qaba?
Ballaarinta Medicaid waxay dad badan u suurtagelisay inay ku helaan caymiska daryeelka caafimaadka Medicaid. Taas waxaa ku jira tiro dad ah oo iyaguna u qalma inay helaan dheefaha Medicare. Marka lagu jiro xaaladdaas, waxay u badan tahay inay sidoo kale u qalmi karaan Qorshaha Baahiyaha Gaarka ah ee Laba-hgeesoodka ah (ama qorshe caafimaad oo labada gees u qalma). Kani waa nooc ka mid ah qorshaha caymiska caafimaadka oo loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labadaba. Dadkaan waa kuwo “u-qalmo labada caymis” waayo waxay u-qalmaan macaashyada Medicaid iyo sidoo kale macaashyada Medicare.
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxay siiyaan caawimaad dheeraad ah dadka u baahan. Taasi waxaa sabab u ah dakhliga, naafonimada, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaadka. Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ayaa la shaqeeya qorshaha caafimaadkaaga ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Inta badan qorshayaasha caafimaadka laba-geesoodka ah waxay sidoo kale ku siinayaan faa'iidooyin iyo sifooyin ka badan marka loo eego inta aad ka heli karto Medicare-ka asalka ah dhammaan kuwa ugu hooseeya sida $0 khidmadaha qorshaha. Ogow wax badan oo ku saabsan macaashyada caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah.
1 Xaalada Go'aamada Balaadhinta Medicaid ee Gobolka: Khariiradda Isdhexgal (KFF, Nofeembar 19, 2021), https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/status-of-state-medicaid-expansion-decisions-interactive-map (a helay Nofeembar 22, 2021).
2 Daloolka caymiska: Dadka qaangaarka ah ee saboolka ah ee aan caymiska lahayn ee ku nool gobolada aan ballaarin Medicaid (KFF, Janaayo 21, 2021), https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/the-coverage-gap-uninsured-poor-adults-in-states-that-do-not-expand-medicaid (la helay Diseembar 14, 2021).
3 Qiimaynta ku aadan Saamaynta Ballaarinta Medicaid (Kooxda Menges, Agosto 2021), https://www.themengesgroup.com/upload_file/medicaid_expansion_impacts_report_menges_group_august_2021_final.pdf (la helay Nofeembar 22, 2021).
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:16 SUBAXNIMO CDT